China Diki Precision Spraying Machine yeSainzi Ongororo na Ultrasonic Spray Atomization Equipment Kugadzira uye Fekitori | Qianrong
Muchidimbu Precision Spraying Machine yeSainzi Ongororo naUltrasonic Spray Atomization Equipment
Ultrasonic pfapfaidzo atomization michina idiki diki chaiyo yekumwaya muchina yakakodzera yesainzi yekutsvaga kuyedza. Inotora QRsonic ultrasonic yekupwanya tekinoroji yekukwirira kwakaenzana kwe-sub-micron uye nano-level yakatetepa firimu kupfeka. Inoshandiswa zvakanyanya mumasero emafuta, maseru ezuva, uye kupfeka kwegirazi. , Magetsi maseketi nemamwe maindasitiri.
Hangzhou Qianrong Automation Equipment Co, Ltd. inyanzvi inogadzira yakazvimirira kutsvagisa nekusimudzira, kugadzirwa uye kutengesa kweepamusoro-simba ultrasonic musimboti zvikamu uye zvakakwana seti yemashandisirwo emidziyo, ichitarisa kune isiri-yakamisikidzwa simba ultrasonic kunyorera. Iwo makuru maficha anobatanidzwa ndeaya: ultrasonic atomization kupuruzira, ultrasonic indium kupfeka / tinning / dip kuwaya, ultrasonic kucheka, ultrasonic yakakwira-tembiricha mhinduro kurapwa, ultrasonic kupararira / kupwanya / emulsification / homogenization, Ultrasonic epurasitiki / simbi yekumonera, Ultrasonic banga kutenderera / kutenderera Welding / musono kusona, ultrasonic kuturika, nezvimwe.
Ultrasonic atomization kupuruzira michina: shandisa simba remagetsi emagetsi kupwanya mvura kana zvinwiwa kugadzira zvidimbu zvidiki zvemamirioni akati wandei kusvika kumamirioni anopfuura zana muhukuru kuti uwane humidification yemhepo, granulation yemvura, kusanganisa, kusimudzira kwekushanduka kwemakemikari, kupopera, uye simbi. yakanyunguduka mafeni eSystem uye zvimwe zvinangwa.
Kufanana kwepamusoro: Ultrasonic kupuruzira ndeye yakakwira-yekuita maindasitiri-giredhi chaiyo yekupfira tekinoroji, inoshandiswa kwakawanda kufanana kweiyo sub-micron uye nano-scale yakatetepa firimu kupfeka.
Kuchengetedza zvinhu uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza: Sezvo yakaderera-kumhanyisa pfapfaidzo pasina kumanikidza iri nyore kudzora, uye madonhwe anowira pane substrate panzvimbo yekuwedzera kubva kune substrate, inogona kuve nechokwadi chekudzikisira kwakakura muhuwandu hweyakanyanya, chengetedza yakawanda zvinhu uye kuderedza kusvibiswa kwezvakatipoteredza. Iko kupfeka kushandiswa kweiyo yeiyo ultrasonic kupuruzira inopfuura kanokwana kana iyo yechinyakare maviri-emvura kupopera.
Kudzora kwepamusoro: Kana yakadzika kwazvo kuyerera kwero pachinodiwa, iyo kamwene ndiyo inonyanya kudiwa. Kana zvichimwayiwa zvidimbu zvinomiswa, zvine zvakasarudzika. Kuburikidza neiyo ultrasonic mhedzisiro yemubhu pachayo, izvo zvidimbu zvinochengetwa zvakaenzana zvakamiswa panguva yese yekumwaya nzira kuona kuti iwo unoshanda zvimedu zvakapararira zvakaenzana zvakapararira mune yakatetepa nhete.
Kubudirira kwepamusoro uye simba rekuchengetedza: iyo mvura inoendeswa kumusoro wechipfira negiravhiti yayo kana yakaderera-pombi pombi uye inowana inomization inoenderera kana yepakati, isina kuvhara, isina kusakara, hapana ruzha, hapana kumanikidza, hapana zvinofamba zvikamu, hapana mvura inotonhora inodiwa panguva yeatomization, uye yakaderera simba rekushandisa, Iyo michina iri nyore, iyo yekukundikana mwero yakaderera, iyo ultrasonic kamwene ine yega-yekuchenesa basa, uye kugadzirisa kwezuva nezuva kuri mahara.
Inoshandiswa zvakanyanya: Ultrasonic yekupuriza michina inowanzo shandiswa mumafuta maseru, matete firimu photovoltaic maseru, matete firimu machira ezuva, perovskite maseru ezuva, maseru ezuva, graphene kupfeka, nesilicon photovoltaic maseru, magirazi ekuputira, emagetsi maseketi uye mamwe maindasitiri. Iyo kamwene inogona kuiswa kune akasiyana mhinduro, tsvina, makemikari zvinwiwa, uye oiri zvinwiwa zvinogona zvakare kuve atomized.
Pashure: 3000W Yakapisa-inyauka Kuisa Simbi Welding yePlastiki End Caps yeKuchipeta Filter Welding Kugadzira Line
Zvadaro: Ultrasonic Metal Powder Atomization Technology yeTin Powder NePamusoro Frequency Ultra
30Khz 700w Ultrasonic Vibratior yeiyo Ultrasonic ...
RFID Smart Kadhi 60Khz Yakakwira Frequency Ultrasonic ...
38mm dhayamita 28Khz Ultrasonic Vibration Yakatumirwa ...
40Khz Inotakurika Chiedza Ultrasonic Kucheka Chigadzirwa ...
20Khz Ultrasonic Plastiki Welding Machine yeT ...